Nhoroondo yekambani - Shenzhen OTAO Technology Co., Ltd.
OTAO, kubvira 2015, ichienderera ichishandira vanopfuura zviuru zvinomwe zvevatengi, kusanganisira mazana matatu + mabrandi pasirese.
Semumwe wevanotungamira vagadziri vevadziviriri vechidzitiro, nyanzvi mukupa iyo-yekumira mhinduro yekutsvagisa, kuvandudza, dhizaini, bhajeti uye kugadzirwa kwevadziviriri vechidzitiro cheMafoni mafoni, maLens lenzi, Mahwendefa,PC, Watches, Makamera, GPS, Mota, Midziyo yemumba uye Maindasitiri Mashini ...
Kuti upe basa riri nani kune vatengi, OTAO yakagadzika nyanzvi yepamusoro-magumo akatsamwa girazi R&D yepakati uye yekugadzira base, 12000m2, ISO / SGS / TUV inosimbiswa.
Pachokwadi gamuchirai OEM / ODM kubatana pamwe nesu muhunyanzvi hutsva mugirazi rakadzikama.
"Ita zvakanaka, Ita kuti zvive nyore, Zviite zvakasiyana!"
Kambani yekutanga yakawana TUV cerfiticate mumunda wechidzitiro chekudzivirira.
Kambani yekutanga yakagadzira 3D curve tekinoroji mumunda wechengetedzo wedziviriro.
Chipo chinopa veMercedes-Benz vagoveri, Vagadziri vagoveri.
Mutengesi wemakambani enhare muAmerica neEuro.
Mutengesi weAmerican neEuropean anozivikanwa screen screen protector.
Amazon 5 Star mutengesi
"Kukura | Kugovana | Kugadzira | Incubating"
"Kuvhura | Passion | Mufaro | Basa"
Zvinokosha zvekuvandudza kweOTA
Kubva 2005, OTAO iri kuramba ichirwisa uye kuvandudza chigadzirwa utsanzi, kusimudzira kwechikwata, kushandira vatengi uye kuita munharaunda.
Yakashanda nekambani yeJapan neKorea kuR&D zvinhu zvitsva zvevadziviriri vechidzitiro
Kuwedzera mitsara yekugadzira uye kutenga akawanda CNC michina, bvunzo michina kudzora mhando Yakagadzirwa UV girazi auto yekuisa muchina; Setup B2C timu yekutengesa uye nyora Amazon premium mutengesi
Isu tinoisa mari uye takawana nyowani 12000 m2 fekitori chivakwa uye 2 R&D nzvimbo muFenggang taundi, Dongguan Guta, kuwedzera chiyero chekugadzira nekuvandudza Technology yedu nehunyanzvi. OTAO inozvipira kupa yakakwira-magumo mhando zvigadzirwa.
Inozvitsaurira kune 3D ful chifukidziro ine izere AB glue yakadzikama girazi uye 2x shatterproof 3D yakatsamwa girazi mudziviriri
2016 Inovandudza yakanyanya kusimba 2x shatterproof yakadzikama girazi uye girazi screen chengetedzo ine silicone rim tekinoroji yakatangwa.
Kuve mumwe wekutanga vagadziri vekutanga kwakatanga 3D yakakomberedzwa yakanyorova girazi kugadzirwa kwemazhinji. Anopfuura mamirioni mayuniti eiyo 3D yakamonerwa yakanyorovera girazi chidzitiro vadziviriri anga atengeswa.
Yakagadziriswa 3D yakakomberedzwa girazi rakadzikama. Akaisa mari $ 1 miriyoni muR & D uye mitsara yekugadzira
OTAO tarisa pakuburitsa yakadzikama girazi screen vadziviriri
Akanyoreswa OTAO brand, muzita reShenzhen OTAO Technology Co. Ltd.
ipa dzinoverengeka nhare mbozha zvishongedzo OEM sevhisi kune anozivikanwa brand makambani.
Fulljion Dhijitari Tekinoroji co., Ltd. yakavambwa uye yakatsanangurwa seye foni accessories accessories.
ISO14001: 2015 ISO9001: 2015 OHSAS18001: 2007 SGS ROSH SGS REACH TUV Chitupa
ALIBABA Wakaongorora mutengesi Globalsource yakaongororwa mutengesi
Kushushikana Kukura Hunyanzvi Kurwira
Chinangwa chekupa izvo zvakanaka zvigadzirwa, sevhisi, zviitiko kune mumwe wedu uye vatengi kubva kumativi ese epasi.